Haddii aad qorsheyneyso safarkaaga ugu horreeya ee Yurub, waxaa jira waxyaabo yar oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato magaalooyinka adduunka ugu quruxda badan. waxaan u qaabeynay hagaha ugu fiican ee 10 khaladaadka safarka waa inaad ka fogaataa Yurub. A trip to the…
Waxaa si sax ah loo rumeysan yahay in safarku uu yahay hal shay oo aad iibsato si aad u noqoto ama aad u dareento hodan! Had iyo goorna ma'aha lagama maarmaan inaad u baahan tahay inaad kala goyso lacagtaada dadaalka badan si aad ugu raaxeyso hodantinimada. Iyada oo la qorsheynayo in ay ka baxdo qorraxda-dhunkato kuleylka…
Uur yeelashada waa mid ka mid ah waqtiyada ugu fiican noloshaada. Way dhacdaa, si kastaba ha ahaatee, la imaado xaddidaadaha qaarkood. Gaar ahaan haddii aad qorsheynaysid socdaalka inta aad uurka leedahay. Qaadashada iyo dhisida ilmaha waxay xaddidaysaa nooca gaadiid ee aad u isticmaali karto inaad ku socoto, gaar ahaan marka…
Waxaad ku helay in la xiriiri taariikhda, tahay, iyo dhaqanka ee Brussels iyo aad ayaa diyaar u ah si ay u sahamiyaan ka baxsan xuduudaha magaalada hadda. Nasiib wanaag, sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan si ay u sahamiyaan gudahood safar maalin ka Brussels a. Sidaas badan si, in waxaan go'aansanay…